Kunze Coaxial Cable Amplifier Vagadziri & Vatengesi | China Kunze Coaxial Cable Amplifier Factory
Bidirectional Line Extender gudzazwi ZJ-LE1G-36APP
Nhanganyaya ZJ-LE1G-36APP inzira imwe chete yepamusoro-kuwana Bi-inotungamira Line Extender gudzazwi inokodzera kukwidziridza chiratidzo muHFC system coaxial trunk. Iko CTB / CSO kuita kwakasarudzika nekudzoka kurasikirwa kwe16 dB. kuwanda kwediplex firita inosarudzika. Iko kune zvakare AGC / MGC mabasa. Hunhu 1. Gallium arsenide gudzazwi modhi inoshandiswa nzira yekumberi. 36dB kuwana kwepamusoro; 2. Yakapihwa neiyo frequency mhinduro yekugadzirisa plug- mune unit, inokwanisa kunyatso compensatin ...
Mini Bridge Gudzazwi ZA-MB-1G-40APP
Zvimiro 1. Inoshandisa Enhanced Gallium Arenide (E-GaAs) ma module muPamberi Nzira. 2. Kuwana Kwakakwirira. 3. High goho mumatunhu. 4. Kugadzirisa iyo plug yeiyo frequency kupindura, inogona kunyatso kubhadhara iyo yakasimudzwa pasuru iyo inogadzirwa nekunetesa kwetambo yemagetsi isiri-mutsara. 5. Kunze kwekurasa aruminiyamu dzimba inotora yepasirese yepamusoro passivated kugadzira uye yakapetwa kaviri-isina mvura yekugadzira, iyo unit haisi chete inorwisa-inoparadza uye inorwisa-kukwegura, asi zvakare ine yakanaka radiation, uye ine yakanaka ...
Mutsetse Extender gudzazwi ZA-LE1002-S
Hunhu 1. Gallium arsenide gudzazwi modhi inoshandiswa nzira yekumberi. 36dB kuwana kwepamusoro; 2. Inopihwa iyo frequency mhinduro yekugadzirisa plug-in unit, inokwanisa kunyatso kubhadharisa iyo convex hull inokonzerwa nekambo nonlinear kuderedzwa; 3.Ipasi rese epamberi epasirosi yekurapa uye yakapetwa kaviri isina mvura maitiro anoshandiswa mune yekunze mhando aruminiyamu kufa kukanda casing, isingagadziriswe nekuora uye kukwegura, yakanaka mukupisa kupisa, kusakwana kwemvura uye electromagneti ...
ZA-APP-1.2G Kunze Kunze
Nhanganyaya ZA-APP-1.2G inzira mbiri dzakakwira-kuwana Bi-inotungamira Line Extender gudzazwi inokodzera kukwidziridza chiratidzo muHFC system coaxial trunk. Iko CTB / CSO kuita kwakasarudzika nekudzoka kurasikirwa kwe16 dB. kuwanda kwediplex firita inosarudzika. Zvimiro 1. Gallium arsenide gudzazwi module inoshandiswa pamberi penzira. 38dB kuwana kukuru; 2.Yakapihwa neiyo frequency mhinduro yekugadzirisa plug-in unit, inokwanisa kunyatso kubhadharisa iyo convex hull inokonzerwa nekambo nonlinear ...
Hunhu ● Gallium arsenide gudzazwi module inoshandiswa munzira yekumberi. 36dB kuwana kwakanyanya ● Kunopihwa iyo frequency mhinduro yekugadzirisa plug-in unit, inokwanisa kunyatso kubhadharisa iyo convex hull inokonzerwa nekambo nonlinear kuderedzwa. ● Yepasirose yepamusoro kurapwa kwepashure uye kaviri dura isina mvura maitiro anoshandiswa mune yekunze mhando aruminiyamu kufa kukanda casing, isingagadziriswe nekuora uye kukwegura, yakanaka mukupisa kupisa, kusakwana kwemvura uye remagetsi sh ...